Speeches – HlaMin
One of my early reference books wasacollection of Classic Speeches (e.g by Winston Churchill and Abraham Lincoln). They complemented the speeches by Bogyoke Aung San and U Nu.
I enjoy attending Literary Talks and Seminars.
I have listened to many speeches at Toastmasters meetings and contests, and online (e.g TED talks, motivational speeches, servant leadership).
Speech by Dr. Zaw Wai Soe (Rector, UM (1))
He spoke from the heart. He stressed the importance of networking, planning and execution of CDM (Civil Disobedience Movement) to ensure that disruption of the country can never again be caused by whimsical people who do not care about the education, health and well being of the citizens.
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး ပြောကြားချက်ကျွန်တော် ပါမောက္ခချုပ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အရိုးရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ အရိုးရောဂါ ကုသမှု နည်းပညာ အသစ်များ ခွဲစိတ်မှု အသစ်များ များစွာကို ပြုလုပ်သင်ကြားပို့ချ ပေးခဲ့ပြီးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ အရေးပေါ်ဆေးပညာနှင့် အ‌‌ရေးပေါ်ဆေးပညာ ဌာနကို စတင်တည်ထောင်ပေးခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ကျောရိုးခွဲစိတ်မှုပညာနဲ့ ကျောရိုးခွဲစိတ်မှု ပညာဌာနကို စတင်တည်ထောင်ပေးခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိတဲ့ အရေးပေါ်လူနာတင်စနစ်ကိုလည်း စတင် တည်‌ထောင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန်မှာ ဆေးပညာရှင်များ သူနာပြုများ ဆေးပညာ ဆေးလောကသားများအတွက် Skill, Simulation and Research center လို့ခေါ်တဲ့ သင်ကြားပို့ချရေး အဆင့်မြင့်ပညာဌာနကြီးကိုလည်း စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Covid 19 pandemic ကာလအတွင်းမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Covid 19 ကာကွယ်ကုသရေး ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ ဒုတိယ ဥက္ကဌ အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ၊ Covid 19 ရောဂါ ကုသရေး ကာကွယ်ရေးတို့အတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့သူ တစ်ဦးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Covid 19 အနေအထားအရ Community ထဲမှာ အထိုက်အလျောက် Immunity ရရှိနေပြီလို့ ယူဆရပါတယ်။ ပျံ့နှံ့ကူးဆက်မှု ကျဆင်းနေပြီး 3rd wave မဖြစ်အောင် Mask တပ်ဖို့၊ လက်ဆေးဖို့ ခပ်ခွာခွာနေဖို့ လိုပါသေးတယ်။ တစ်ဦးကို တစ်ဦးသတိပေးဖို့လဲ လိုနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဆန္ဒတွေ ဖော်ထုတ်ကြရပါမယ်။ ကျွန်တော်ဘာမှ မလိုချင်တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အသက် ၆၀ ပြည့်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သေမယ်ဆို သေလို့ရပါပြီ။ ကျွန်တော့် အတွက်ဆိုရင် ဘုရား၊ တရားနဲ့ နေဖို့ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်အလုပ် လုပ်နေခြင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အလုပ် လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ အောက်တန်းကျ နေသောကြောင့်၊ နိုင်ငံ ဆင်းရဲနေသောကြောင့် နိုင်ငံ ဒုက္ခရောက်နေသောကြောင့် အလုပ်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် မှာ ဆန္ဒတစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့၊ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် အာမခံချက်ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတ၊ နိုင်ငံ့အကြီးအကဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့လို နိုင်ငံ့အကြီးအကဲ နှင့် နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကို အကျိုးအကြောင်းမရှိ အချိန်မရွေး မျှတတဲ့ အများလက်ခံတဲ့ ဥပဒေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ ကြက်ကလေး ငှက်ကလေး ဖမ်းသလို ဖမ်းပြီး စီရင်နိုင်တဲ့၊ တရားစွဲအမှုလုပ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံ မဖြစ်ချင်ပါဘူး။ လက်နက်အားကိုး၊ လက်နက်ရှိတဲ့သူက အင်အားကြီးတဲ့သူက အနိုင်ရနေတဲ့ နိုင်ငံ မဖြစ်ချင်ပါဘူး။ အဲဒိလို စနစ်၊ အဲဒိလို နိုင်ငံမျိုးမှာ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်လည်း လူမဖြစ်ချင်လို ကိုယ့်သားသမီး၊ ကိုယ့်တပြည့်၊ ကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကိုလည်း မထားခဲ့ချင်ပါဘူး။ မထားခဲ့နိုင်ပါဘူး။ ဆရာတို့‌ဆေးပညာနဲ့ ဆေးကုသမှု ဆေးလောကအတွက်ကတော့ လူနာသာ ပထမ၊ လူနာသာ အဓိက ပါ။ မိမိအတွက်၊ ကိုယ့်အတွက်၊ ကိုယ်ကျိုးအတွက်ဆိုတာ နောက်မှ စဉ်းစားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တို့တိုင်းပြည်၊ တို့လူမျိုး၊ တို့ပြည်သူတွေ တို့လူနာတွေ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆေးကုသမှု မရခဲ့တာ၊ ကျန်းမာရေး‌စောင့်ရှောက်မှုတွေ မရခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာနေပါပြီ။ တို့လူနာတွေ တို့ပြည်သူတွေ ခံစားခဲ့ရ သေခဲ့ရ နာခဲ့ရ နာကျင်စွာ ခံစားခဲ့ရတာတွေ ကြာပါပြီ။ တို့ ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားကြိုးစား တို့ ဘယ်လောက်ပဲ အနစ်နာခံ အနစ်နာခံ တို့ဘယ်လောက်ပဲ စွန့်လွှတ် စွန့်လွှတ် မတိုးတက်ပါဘူး။ တို့ လူနာတွေ မသက်သာပါဘူး။ တို့လူနာတွေ အသက်မရှင်ပါဘူး။ အဲဒါ ဘာကြောင့်လဲ။ စနစ်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒိ စနစ်ကို ပြောင်းလဲပစ်မှ ရမယ်။ တည်ငြိမ်တဲ့ စနစ်တစ်ခုကို တို့ တည်ဆောက်ကြရမယ်။ အာမခံချက်ရှိတဲ့ တည်မြဲတဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ လုံခြုံတဲ့ စနစ်တစ်ခုကို ရရှိမှ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ထစ်ခနဲရှိ အာဏာသိမ်း၊ ထစ်ခနဲရှိ ဖမ်းဆီး၊ ထစ်ခနဲရှိ ဖျက်လိုက်ပြောင်းလိုက် လုပ်နေရင်တော့ တို့တတွေ တည်ငြိမ်တဲ့ တည်မြဲတဲ့ လုံခြုံတဲ့ ဘဝ ဘယ်တော့မှ ရမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အနာဂတ် နောင်ကမ္ဘာတည်သရွေ့ တို့လူနာတွေ ကောင်းစေဖို့ အနာဂတ်နောင်ကမ္ဘာတည်သရွေ့ တို့လူနာတွေ နာကျင်မှု ကင်းမဲ့စေဖို့ နောင်အနာဂတ် ကမ္ဘာတည်သရွေ့ တို့လူနာတွေ အသက်ရှည်စေဖို့ တို့ ကြိုးစားကြစို့။ တို့ စွန့်လွှတ်ကြစို့။ တို့ အနစ်နာခံကြစို့။ တို့ အပြစ်တင်လည်း ခံကြစို့။ တို့ ကျိန်ဆဲလည်း ခံကြစို့။ ဒီအချိန်မှာ အနာဂတ်မြန်မာပြည်ကောင်းစားဖို့ အနာဂတ်ပြည်သူတွေ ကောင်းစားဖို့ အနာဂတ်လူနာပေါင်းများစွာအတွက် တို့တတွေ အဓိဌာန်ပြုကြစို့။-ကျွန်ုပ်သည် လူသားအားလုံးတို့၏ ကိုယ်၏ ကျန်းမာရေး စိတ်၏ ချမ်းသာရေးကို ကျွန်ုပ်၏ အရေးကဲ့သို့ ယူဆပါအံ့-ကျွန်ုပ်အားဆေးပညာသင်ကြားပေးခဲ့သော ဆရာသမားများအား မိဘသဖွယ် ရိုသေ လေးစားပါအံ့-ကျွန်ုပ်သည် လုပ်ဖော်ကိုဖက် ဆေးပညာရှင်များကို ညီရင်းအကို မောင်ရင်းနှမကဲ့သို့ လေးစားစွာ ဆက်ဆံပါအံ့- ကျွန်ုပ်သည် သမားကောင်းတစ်ဦး၏ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် မွန်မြတ်သည့် ဂုဏ်သိက္ခာ အစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းပါအံ့-ကျွန်ုပ်သည် စည်းပူး တတ်မြောက်ထားသော ဆေးပညာဖြင့် ဂီလာန ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကျန်းမာ‌ရေးကို စေတနာ မေတ္တာရှေ့ထား၍ လူမျိုးဘာသာ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး စွမ်းစွမ်းတမံ စောင့်ရှောက်ကုသပါအံ့။-ကျွန်ုပ်သည် ဂီလာန ပုဂ္ဂိုလ်များ ကုသစဉ် တွေ့မြင်ကြားသိရသည့် လျှို့ဝှက်အပ်သော အတွင်းရေးကိစ္စများကို ဖွင့်ဆိုအပ်သည်တို့မှ လွဲ၍ မည်သည့်အခါတွင်မဆို ဖွင့်ဟခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်ပါအံ့။-ကျွန်ုပ်သည် လူသားတို့အား ဘေးဥပါတ် ဖြစ်စေမည့်ဆေး။ သေစေတတ်သည့် ဆေးများကို ကိုယ်တိုင် ပေးခြင်းမှသော်လည်းကောင်း၊ သူတပါးအား ပေးစေခြင်းမှသော်လည်းကောင်း အခါခပ်သိမ်း ရှောင်ကျဉ်ပါအံ့။-ကျွန်ုပ်သည် တရားမဝင်သော ကုသခြင်းတို့မှ အမြဲတစ္ဆေရောင်ကျဉ်ပါအံ့။-ကျွန်ုပ်သည် စည်းပူးတတ်မြောက်ထားသော ဆေးပညာဖြင့် လူသားတို့၏ ဘဝနှင့် အသက်ကို တန်ဖိုးထားလေးစားစွာ ကာကွယ်စောင့်ရှောင့်ပါအံ့။ဤကတိသစ္စာပြုသိအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါသော် အကျွန်ုပ်သည် ကောင်းကျိုအင်္ဂလာ အဖြာဖြာနှင့် ပြည့်စုံပါစေသား။တို့ ဘယ်သူ့ကို မှ မမုန်းဘူး။ ဒါပေမဲ့ တို့ ပြည်သူတွေကို စေတနာထားတဲ့သူ၊ တို့ပြည်သူတွေကို လုံခြုံစေတဲ့သူ၊ တို့ပြည်သူတွေကို စိတ်ချမ်းသာစေတဲ့သူ၊ တို့ပြည်သူတွေကို ကျန်းမာအောင် အသက်ရှည်အောင် ထားနိုင်တဲ့သူ၊ တို့ပြည်သူတွေကို ထမင်းဝအောင် ကျွေးနိုင်တဲ့သူ၊ တို့ပြည်သူတွေကို စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်းသာ ရှိစေနိုင်တဲ့သူကို သဘောကျတယ်။ ထောက်ခံတယ်။ ဦးဆောင်စေချင်တယ်။ ချစ်တယ်။တို့ပညာရေး၊ တို့ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေး တို့ မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့ ပညာရေးအတွက် ပညာရေးကို ဦးဆောင်နေသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ တက္ကသိုလ်တွေအားလုံးရဲ့ ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီ ဥက္ကဌ တစ်ယောက်အနေနဲ့ လုံးဝ (လုံးဝ) စိတ်မကောင်းဘူး။ ထက်မြက်တဲ့ တော်တဲ့ ထူးချွန်တဲ့ ဦးနှောက်ကောင်းတဲ့ သူတွေ ရှိနေလျက်နဲ့ တို့ပညာရေးက ရှိသမျှ ကမ္ဘာပေါ်က နိုင်ငံတွေထဲမှာ အောက်ဆုံးရောက်နေခဲ့တာ မကျေနပ်ဘူး။ ဒါဟာ တစ်ရက် တစ်မနက် တစ်လ တစ်နှစ် ရနိုင်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ နှစ်ပေါင်းများ စွာ ကြိုးစားကြမှ တည်ဆောက်ကြမှ အားထုတ်ကြမှ တည်ငြိမ်မှ အေးချမ်းမှ သာယာဝပြောမှ အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အဆင့်မြင့်တဲ့ ပညာရေးကို ထားခဲ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ အခုလို စနစ်မျိုး အခုလို ဘဝမျိုး အခုလို နိုင်ငံမျိုးမှာ ဘယ်လိုမှ ပညာရေး မတိုးတက်နိုင်ဘူး။ ပညာရေးက မတည်ငြိမ်နိုင်ဘူး။ လွတ်လပ်စွာ ပညာမသင်ကြားနိုင်ဘူး။ ကောင်းမွန်တဲ့ အဆင့်မြင့်တဲ့ ပညာကို သင်ကြားနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ပညာရေး၊ တပည့်ခံ ပညာရေးပဲ ရနေမှာ ဖြစ်တယ်။ ထိုးထွင်းဉာဏ်မရ၊ ထိုးဖောက်တွေးခေါ်ခွင့်မရ အဖိနှိပ်ခံ ပညာရေးပဲ ရမှာဖြစ်တယ်။ အခုကိစ္စအခုအချိန်မှာ အစိုးရိမ်ဆုံး၊ စိတ်အထိခိုက်ဆုံး မျှော်လင့်ချက်တွေ အကင်းမဲ့စေဆုံးကတော့ ငါတို့ရဲ့ ပညာ‌ရေးအနာဂတ်ရဲ့ ပညာရေး မျိုးဆက်သစ်ရဲ့ ပညာရေးပဲဖြစ်တယ်။ မျိုးဆက်သစ်တို့ သားသမီး မြေးမြစ်တို့ အဖေ တောင်းပန်ပါတယ်။ အဖိုးတောင်းပန်ပါတယ်။ အေဖတို့ တာဝန္မေက်ခဲ့ဘူး။ အဖိုးတို့ တာဝန္မေက်ခဲ့ဘူး။ အဖေတို့ ကိုယ့်အတွက်ပဲ ကြည့်ခဲ့ကြတယ်။ အဖေတို့ အဖိုးတို့ တာဝန်ကျေအောင်း ဆောင်ရွက်ကြပါတော့မယ်။ အဖေလို အဖိုးလို အခေါ်ခံထိုက်တဲ့ သူတွေဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြမယ်။ စွန့်လွှတ်ကြမယ်။ တိုက်ပွဲဝင်ကြပါတော့မယ်။ Civil Disobedient movement အောင်မြင်အောင် စနစ်တကျ တောင်ရွက်ကြရမယ်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြဖို့ လိုအပ်တယ်။ အကောင်အထည်ဖော်ကြဖို့ ဝိုင်းဝန်းကြဖို့ လိုအပ်တယ်။ ဆရာဝန်ဆိုတော့ လူနာအတွက် စဉ်းစားရမှာပဲ။ အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက် စဉ်းစားရမှာပဲ။ ကိုယ်ချင်းစာ စိတ်နဲ့၊ ငါသာ လူနာဆိုရင် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ စဉ်းစားကြရမယ်။ လူနာနေရာမှာ ငါတို့ဆိုရင် ဘာဖြစ်ချင်လဲ ဆိုတာ စဉ်းစားရမယ်။ ဝေဒနာ ခံစားမှုကို သက်သာပျောက်ကင်းအောင် တို့.. ဆောင်ရွက်ကြရမယ်။ ပရဟိတ အရေးပေါ်ဌာနတွေ ပရဟိတ ဆေးခန်းတွေ ပရဟိတ ဆေးရုံတွေ နေရာအတိအကျနဲ့ ဖော်ပြပြီး ဖွင့်ရမယ်။ အခမဲ့ ကုသနိုင်အောင် စီစဉ်ကြရမယ်။ စွန့်လွှတ်ဖို့၊ စွန့်စားဖို့၊ အခြေအနေမကောင်းရင် အနှိပ်ဆက်ခံ အသက်ပေးဖို့အထိ စဉ်းစားထားကြရမယ်။ ဒါဟာ တစ်နေ့ တစ်ရက် ပြီးသွားမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ တစ်နေ့ တစ်ရက်နဲ့ မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။ နေ့ပေါင်းများစွာ၊ လိုအပ်ရင် လပေါင်းများစွာ ငါတို့ ဆောင်ရွက်ရမယ့်၊ ငါတို့ စွန့်လွှတ်ရမဲ့ ၊ ငါတို့ အနစ်နာခံရမဲ့၊ ငါတို့ ပေးဆပ်ရမဲ့ တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ Infra structure ရှိပြီးသား နှစ်ပေါင်းများစွာ စနစ်တကျ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အဆောက်အဦကြီး၊ အဖွဲအစည်းကြီးတဲ့ စနစ်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ သူတွေဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တို့မှာ တိုက်စရာ ဒီလက်နက်ပဲ ရှိတယ်။ တို့တော်လှန်ကြောင်း၊ တို့ ညီညွတ်ကြောင်း၊ တို့ စွန့်လွှတ်နိုင်ကြောင်း၊ တို့ခိုင်မာကြောင်း တို့ ပြကြရမယ်။ ဒီနည်းလမ်းပဲရှိတယ်။ ဒါ့‌ကြောင့် တို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီးပြီ။ တို့ဆန္ဒကို ဖော်ထုတ်ကြမယ်။ တို့ CDM ကို လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီ။ အသေးစိတ် အစီအစဉ်တွေ ရေးဆွဲ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ရမယ်။ တည်ဆာက်နေတယ်။ တို့မရှိတော့ရင် ဘယ်သူ ဆက်မလဲ ဘယ်သူ ဦးဆောင်မလဲ။ ကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းရမယ်။ ရည်ရွယ်ချက်၊ ဦးတည်ချက်၊ မဆုတ်မနစ်တဲ့ ဇွဲရှိတဲ့သူ အနစ်နာခံနိုင်တဲ့သူ။ အဖမ်းစီးခံနိုင်တဲ့သူ၊ အနှိပ်ဆက်ခံနိုင်တဲ့သူ အသက်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေ ပါဝင် ဦးဆောင်ကြရမယ်။ အဆုံးစွန်ထိ တိုက်ခိုက်ကြရမယ်။ အဆုံးစွန်အထိ တော်လှန်ကြရမယ်။ အဆုံးစွန်အထိ ဆင်နွှဲကြရမယ်။ ငါဘာမှ မဖြစ်ချင်ဘူး။ ငါ ဘာမှ မလိုချင်ဘူး။ ငါဘာမှာ မတောင်းဆိုဘူး။ အနာဂတ်အတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေရှိတဲ့ အနာဂတ်အတွက် အလင်းရောင်တွေ ဖြာဝေနေတဲ့ အနာဂတ်အတွက် ထာဝရအာမခံချက်ရှိတဲ့ အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် နေ့သစ်တစ်ခု ခေတ်သစ်တစ်ခု စနစ်သစ်တစ်ခု ရရင် ငါသေလို့ရပြီ။ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး
Some have suggested to use ကနြျော and ကမြ instead of ကြှနျတျော and ကြှနျမ (which have connotations to Slavery).
Kudos to those who courageously declined (without hesitation) offers to join the illegal institutions.
Special thanks to the younger generations. (Please be careful not to fall prey to the Psychological Warfare team’s bag of tricks.)